Ukukhanya kwesinyathelo - Huayi Lighting
Usendaweni efanele ye- Ukukhanya kwesinyathelo.Okwamanje usuyakwazi lokho, noma ngabe yini oyifunayo, uqinisekile ukuthi uyokuthola kuvuliwe Huayi Lighting.siqinisekisa ukuthi kulapha Huayi Lighting.
IHuayi Lighting Co.ltd iyaqhubeka nokuhlola nokwenza ukuzithuthukisa ekuphathweni..
Sihlose ukunikeza ikhwalithi ephezulu kakhulu Ukukhanya kwesinyathelo.kumakhasimende ethu wesikhathi eside futhi sizobambisana namakhasimende ethu ngokunikela ngezixazululo ezisebenzayo nezinzuzo zezindleko.
Usizo lwabenza imisenenzi etafuleni isibani KT20082-1A abakhiqizi
Ithebula Lamp Isitayela Semvelo Okubalulekile: Imvelo Rattan Qeda: Mat white Umthombo Wokukhanya: E27 Ngemizamo yethu engapheli, umkhiqizo manje utholwa kahle emakethe futhi unenani elikhulu lokuhweba.
Ikhwalithi ephezulu ye-neon strip light HYDT00025 wholesale-Huayi Lighting
Esikhathini esisha, ukuthengiswa kwenkampani kuye kwanda ngokushesha. Ingeniso eyizigidigidi ngonyaka yenza inkampani ibe sezingeni eliphezulu futhi ihole imboni yokukhanyisa.
Ihhotela i-India-Le Méridien
Ihhotela iLe Méridien lidalula itravller enelukuluku nelinokuqamba kokuhlangenwe nakho okungalindelekile nokuhehayo lapho indawo inikela khona. Isuselwe enkathini eyigolide yokuhamba, iLe Méridien ihlala iyindawo yokuhlangana yabantu ukujabulela ukutholakala kwezindawo zomhlaba wonke. Imikhiqizo yokunethezeka ehamba phambili emhlabeni enemivuzo engcono kakhulu.
Izixazululo Zokukhanyisa Landscape
Ukukhanya kwendawo akukhona nje ukusetha ukukhanyisa, kunamanani athile wobuciko nobuhle entweni eyodwa. Kule ndawo yezobuchwepheshe uHuayi ungumnikazi wedumela elihle elinekhono lobuchwepheshe elithelayo kanye nekhono lokuqamba izinto ezintsha. Ubungcweti beHuayi ekukhiqizeni, ukufakwa, ukuthunyelwa nokwakhiwa, noma kungakha idizayini yohlelo oluphelele lokukhanyisa. Iyakwazi ukwenza isoftware yohlelo lokulawula ukukhanyisa ukuqinisekisa ukuthi amaphrojekthi wokukhanyisa ngamunye owenziwa nguHuayi angafeza noma adlule okulindelwe yikhasimende.
HOT # Welcom kuya eHuayi ukukhanyisa i-canton Fair eku-inthanethi
PC: https://ex.cantonfair.org.cn/pc/zh/exhibitor/4ab00000-005f-5254-31d0-08d7ed7809e9 IBig suprprise izoba se Broadcast yethu ebukhoma
Ikhwalithi ephezulu yesitayela sezimboni ezikhanyayo ze-KP10922-L Wholesale-Huayi Lighting
Isibani se-LED Isitayela Sezimboni Izinto: insimbi Qeda: Matt Black + Gold Umthombo Wokukhanya: I-LED ayithembeki kuphela ngekhwalithi, kepha futhi kulula ukuyisebenzisa.
Into ephezulu kakhulu: Imodeli yoMkhiqizo wokukhanya kwesikhukhula cha, DU0129 Wholesale-Huayi Lighting Co.ltd
I-Huayi Lighting HighIkhwalithi Yezinto: Imodeli yoMkhiqizo we-Flood light, i-DU0129 Wholesale-Huayi Lighting Co.ltd Ukukhanya kwesikhukhula Izinto: Umzimba we-Aluminium + ingilazi Qeda: mpunga Isibani: OSRAM 2021/1/11
I-Oman-Hormuz Grand Hotel
IHormuz Grand Hotel yihhotela eliphambili eMuscat Oman, eHuayi linikeze zonke izibani zokuhlobisa nokukhanyisa okuholelekile kuwo womabili amakamelo ezivakashi nendawo yomphakathi.
Vele ushiye i-imeyili yakho noma inombolo yakho yocingo kwifomu lokuxhumana ukuze sikwazi ukukuthumelela isilinganiso samahhala sezinhlobonhlobo zethu zemiklamo! Ufuna ukwazi ulwazi oluthe xaxa mayelana nezibani ze-LED, funda kabanzi.